दिल्लीमा किन रोकियो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ? – Etajakhabar
दिल्लीमा किन रोकियो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ?
बुधबार विहान ढिलागरी दिल्लीका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान दिल्लीको इन्दिरागान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएको छ ।
नियमित उडान सुरु गरेको केही दिनमै नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण दिल्लीमै रोकिएको हो । ठूलो जहाजको सेवासँगै निगम सच्चिने आशा धेरै यात्रुहरुले गरेपनि त्यसो भने हुन सकेन् ।
नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रवीन्द्र श्रेष्ठका अनुसार विमानलाई ट्रान्जिट गर्ने इन्जिनियर नभएपछि विमान दिल्लीमै रोकिएको हो । निगमको विमान यसअघि प्राविधिक समस्या आएर बेलाबेलामा उडान अवरुद्ध हुने गथ्र्यो । तर यसपटक भने ट्रान्जिट गर्ने इन्जिनियरको नयाँ अभावमा नयाँ विमानको पनि उडान अवरुद्ध हुन नपुुगेको हो ।
निगमका अनुसार इन्जिनियर गएको र आवश्यक चेकजाँच गरेपछि विमान नेपाल फर्कनेछ । स्रोतका अनुसार विमान उडाउन दिल्लीको विमानस्थलले इन्जिनयरबाट ‘क्लियरेन्स’ माग गरेको र इन्जिनियर विमानमा नभएपछि विमानस्थलले सुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानलाई दिल्लीमै रोकिदिएको हो ।
नेपाली समयअनुसार दिउसो चार बजे बोर्डिङ पास भइसकेको अवस्थामा एकाएक उडान राेकियाे। जहाज बेलुका ६ बजे दिल्लीबाट उडेर अहिले काठमाडौंमा अवतरण गरिसकेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: ३:१०:३२